नेपालको अर्थतन्त्रमा गोर्खा सैनिकहरुको योगदान « Naya Page
प्रकाशित मिति :9February, 2019 3:13 pm
अहिलेको नेपाल बन्नुभन्दा अगाडि देखि नै यहाँका पहाडे समुदायका मानिसहरू एक अर्का देशमा (बाइसे चौबिसे राज्यका प्रजाहरू) काम गर्न जाने, पञ्जाव लगायतका मुलुकहरूमा सेनाको रूपमा भर्ती भएर काम गर्ने र त्यसको कमाइ लिएर फर्कने गरेको इतिहास रहेको छ । नेपाल एकीकरण पछि र खास गरी नेपाल अंग्रेज युद्ध पछि यो प्रक्रियाले तीव्रता पायो । एकीकरण अभियान र अंग्रेजसँगको युद्ध सम्म नेपालको अर्थतन्त्र नै युद्ध अर्थतन्त्र जस्तो थियो ।
घरलौरी एकजना पुरूष सेनामा जानुपर्ने तथा बाँकी रहेकाहरूले सेनाका अफिसरहरू, राजपरिवार र चौतारिया या निजामती प्रशासनका हाकिमहरूको जमिन कमाउने, ढाक्रेका रूपमा युद्ध सामग्री या सेनाका लागि खरखजाना ओसार्ने काम गर्नुपर्ने भएकोले सबैजसो पुरूषहरू या त सेना थिए या ढाक्रे । यी सैनिकहरू जब सुगौली सन्धि पछिको अवस्थामा लडाइँ बन्द भएकोले कटौतीमा परे र घर फर्के । तिनले बिस्तारै आफ्नो सेवा पञ्जावका राजा रणजीत सिंहको सेनामा बेच्न थाले । लडाइँ सिद्धिएर फुर्सदमा भएका ढाक्रेहरू पनि त्यतिबेलाको पहाडमा भएको खान लाउनको दुःख र साहुहरूको शोषणबाट भाग्दै अंग्रेजको सैनिक सेवामा जान थाले ।
पछि भारतमा अंग्रेज शासन बलियो हुँदै जाँदा उसले रेलवे लाइनको बिस्तार गर्‍यो, कोइला खानीहरू बिस्तार गर्‍ यो । कोलकाता, बैंगलोर, दिल्ली, बम्बइ जस्ता ठाउँमा शहरीकरण पनि तीव्र भयो । यसै क्रममा नेपालीहरू भारतका विभिन्न शहरमा र कोइला खानीमा काम गर्न जाने, आसामतिर खेतीपाती र पशुपालन गर्न जाने क्रम पनि बढ्यो । यो सँगै झन्डै दुई सय वर्ष देखि नेपालको अर्थतन्त्रमा केही न केही रूपमा लाहुरेको कमाइले योगदान गर्न थालेको हो । अहिले यो कमाइ गर्ने ठाउँ फैलिँदै ब्रिटिस सेना, भारतीय सेना, भारतका शहरका गल्ली र कलकारखाना या होटल र वेश्यालय, हंगकंग, सिंगापुर, ब्रुनाइ, मकाउ, अरेबियन मुलुकहरू, इजरायल, मलेसिया, कोरिया, जापान, युरोप र अमेरिका हुँदै विश्वका पचासौँ देशमा फैलिएको छ ।
रणजीत सिंहको पञ्जावी फौज, ब्रिटिस भारतीय सेना र भारतका शहरहरूमा सिभिल नोकरी गरेर कमाइ ल्याउन थालेको झन्डै सय वर्ष पछि पहिलो विश्वयुद्ध पछि नेपालमा अत्यधिक कमाइ भित्रिएको थियो । त्यतिबलाको झन्डै १३ करोड रूपैयाँ एकैपटक नेपाल भित्रिँदा त्यो पैसाले भट्टीपसलको वृद्धि, ज्यालामा बढोत्तरी र नगदको प्रयोग देखि घरजग्गाको कारोबार सम्म निकै बढेको थियो भनि सरदार भीमबहादुर पाँडेले आफ्नो पुस्तक ‘त्यसबखतको नेपाल’मा उल्लेख गरेका छन् । त्यसपछि उस्तै र स्थिर जस्तो रहेको लाहुरे कमाइ सन् १९९० को वरपरबाट खुलेको खाडी राष्ट्रको जागिरले ह्वात्तै बढाइ दिएको हो ।
अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा लाहुरेको कमाइ या प्रचलित भाषाको रेमिट्यान्सको योगदान कुल राष्ट्रिय उत्पादनको झन्डै २३ प्रतिशतको हाराहारी हुन पुगेको छ । अहिले झन्डै २५ लाख नेपालीहरू भारत बाहेकका तेस्रो मुलुकमा काम गर्छन् । विश्व बैंकको एउटा प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्सको मात्रा हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । जस अनुसार सन् २००६ देखि २०१० सम्ममा झन्डै साढे दुई गुना बढी यस्तो कमाइ भित्रिएको छ । तल सन् दुई हजार ६ देखि १० सम्मको तथ्याङ्क दिइएको छ । लाख अमेरिकी डलरमा :
सन् २००६ मा १ अर्ब ४५ करोड ३० लाख डलर रहेको रेमिट्यान्स सन् २०१० मा आइपुग्दा ३ अर्ब ५१ करोड ३० लाख डलर पुगेको छ । अमेरिकी डलरको मूल्य प्रति डिलर ८० रूपैयाँ मानेर हिसाब गर्दा सन् २०१० को आम्दानी नेपाली रूपैयाँमा झन्डै २८१ अर्ब हुन आउँछ । यसरी हेर्दा आजको नेपाली अर्थतन्त्र झन्डै यहि रेमिट्यान्सबाट धानिएको भन्न सकिन्छ ।
केटाकेटीको शिक्षाका लागि भएको खर्च, बूढाबूढीको उपचार र पालन पोषणको खर्च, साना शहरी इलाकामा घरघडेरीको कारोबार, मोबाइल, रेडियो, टिभि, लत्ताकपडा, खानेकुराहरूको किनमेलका लागि यो पैसा खर्च हुने गरेको छ । यसले बोर्डिङ स्कुल फैल्याउने देखि सानातिना शहरबजारहरूको विकासमा पनि योगदान दिँदै आएको छ ।
अझ अलि उच्चस्तरको आम्दानी गर्ने बेलायती सेनामा काम गर्नेहरू, ब्रुनाइ, सिंगापुरे लाहुरे, कोरिया या जापानबाट आउनेहरूको कमाइले त ठूला शहरका सुकिला र राम्रा घर, डिपार्टमेन्टल स्टोर्स, सहकारी बैंकहरू, होटल, रेस्टुरेन्ट व्यवसाय समेतलाई उकासेको छ । यसरी लाहुरेको कमाइले केवल उनीहरूको परिवारको लागि मात्र नभएर नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान गर्दै आएको छ ।
यो कमाइमा गोरखाहरूको योगदानको बारेमा पछिल्लो आँकडा उपलब्ध भएन । तर सन् १९९७/९८ को राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार त्यतिबेला जम्मा ६ अर्ब ९८ करोड रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो । यसमध्ये बेलायती सेनामा कार्यरत सैनिक र पेन्सनरहरूले मात्रै १ अर्ब २८ करोड भित्र्याउँथे । हिमाल पत्रिकाका तत्कालीन सम्पादक राजेन्द्र दाहालले हिमालमा लेखेको लेखकलाई उद्धृत गर्दै उनीहरूले यसमा बु्रनाइ, सिंगापुर र भारतीय सेनामा कार्यरत गोरखाहरूको आम्दानी नजोडिएको बताएका छन् ।
यस अगाडि सन् १९९४ मा लियोनिल काप्लानले गरेको अध्ययनमा १९९४ मा बेलायती सेनामा कार्यरत गोरखाहरू र पेन्सनरहरूले वर्षेनी नेपालमा झन्डै ३ अर्ब नेपाली रूपैयाँ बराबरको बेलायती पाउन्ड ल्याउँथे । सन् १९९९ मा यो रकम झन्डै ३.५ अर्ब बराबर थियो भनी सेडेन र अन्यले लेखेका छन् । त्यसै गरी त्यतिबेला भारतीय सेनामा ४८ हजार गोरखा सैनिकहरू रहेको र उनीहरूले वार्षिक झन्डै ५.८ अर्ब र १,०५,००० पेन्सनरहरूले ४.८ अर्ब रूपैयाँ भित्र्याउने गरेको उनीहरूले लेखेका छन् ।
गोरखाहरूका पक्षमा गेसोले चलाएको आन्दोलनका कारण पछिल्लो समयमा ब्रिटिस गोरखामा कार्यरत गोरखाहरूको तलब र पेन्सनमा धेरै गुणा वृद्धि भएको छ । सन् १९९९ ताका जम्मा ७ सय जति पेन्सन पाउने सिपाहीको अहिले २७ हजार रूपैयाँ पेन्सन पुगेको छ भने त्यतिबेला ४ हजार भन्दा कम पेन्सन पाउने गोरखा मेजरको अहिले ७५ हजार ७९० रूपैयाँ पुगेको छ । गेसो महासचिव महेन्द्रलाल राईका अनुसार अहिले झन्डै २५ हजार गोेरखाहरू पेन्सनमा छन् । उनीहरूले झन्डै ७५ करोड रूपैयाँ मासिक पेन्सन नेपाल ल्याउँछन् ।
यसरी नै वेलफेयर पेन्सनका रूपमा पनि मासिक ७ करोड रूपैयाँ जति नेपाल आउँछ । गेसो आन्दोलनका कारण बेलायत सरकारले ४ वर्ष बेलायती सेनामा सेवा गरिसकेका लाहुरेहरूलाई बेलायतमा बसोबासको सुबिधा दियो । यस्तै सन् १९९७ पछि पेन्सनमा बसेका गोरखाहरूले पनि परिवार सहित बेलायतमा बसोबास गर्न पाउने गरेका थिए । यी सब कारणले अहिले बेलायती सेनामा काम गरेवापत पाउने पेन्सन र तलबको ठूलो हिस्सा बेलायतमा नै बस्ने गरेको छ । त्यसैले यतिबेला यति नै रकम नेपाल भित्रिन्छ भन्ने तथ्याङ्क निकाल्न पनि गाह्रो भएको छ ।
जे होस् गोरखा सैनिकहरू उनीहरूका परिवार र नेपाली अर्थतन्त्रमा राम्रो योगदान पु र्‍ याउँछन् । तर, यस आलेखको मुख्य चासो भने अलि फरक छ ।
अहिलेको नेपाली राजनीतिक बहसमा रेमिट्यान्सले यो गर्‍यो, त्यो गर्‍यो, भनेर खुबै चर्चा हुने गरे पनि त्यसका नकारात्मक प्रभावहरूका बारेमा भने खासै चर्चा हुने गरेको पाइन्न । नेपालमा लाहुरे प्रथा या गोरखा भर्ती परम्परा नभएको भए अहिलेको भन्दा नेपालको अनुहार अर्कै रहने थियो भन्ने बारे पनि कमै बहस भएका छन् । यो लेख तयार पार्ने क्रममा मैले मेरा मित्र सिकलिसका पूर्व गाविस अध्यक्ष मनबहादुर गुरूङलाई सम्पर्क गरेको थिएँ ।
सिकलिस कास्की जिल्लाको उत्तरपूर्वी भेगमा अन्नपूर्ण हिमालको फेदको गाउँ हो । गुरूङहरूको आदिथलो मानिने क्होला सोँथर भन्दा एकदिनको बाटो दक्षिण पश्चिममा लगभग दुई हजार मिटरमाथि अवस्थित यो गाउँ गुरूङहरूको भाषा, संस्कृति र परम्परागत अर्थतन्त्रको नमुना गाउँ हो । कुनै समयको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र रहेको सिकलिसमा हाते तान लगाएर अल्लो र उनीका कपडाहरू (काम्लो, भाङ्ग्रा, थैला, बख्खु) बुन्ने, चोयाका डोका, डाला, नाङ्ला, चाल्ना, छत्री, नाम्ला, थुन्से, मान्द्रा भकारी, स्याखु, चित्रा बनाउने काम हुन्थ्यो । हरेक गाउँका लेकतिर स्लेट ढुंगा बनाउने खानीहरू थिए ।
लेकमा फापर, आलु, जाैं, गहुँ, बेसीमा धान, मकै, कोदोको खेती हुन्थ्यो । हरेक घरको आँगनमा ९/१० खाल भएका मकैका शुली हुन्थे । पहिले स्व. डा. चन्द्रबहादुरको आँगनमा सबैभन्दा ठूलो २८ खाल भएको शुली हुन्थ्यो । मकै चारबाली लगाइन्थ्यो । अर्थात् फागुन चैत्र, बैशाख र जेठमा रोप्ने अनि असार, साउन, भदौ र असोजमा थन्क्याउने । अब अहिले त्यो २५ प्रतिशत जति मात्र बाँकी होला । हरेक खेतबारीबाट दुई बाली अन्न भित्रिन्थ्यो ।
मनबहादुर गुरूङका अनुसार सिकलिसमा मात्रै पहिले प्रत्येक घरमा गाई, भैसी या भेडी गोठ हुन्थे । धनीहरूका त तीनै खालका गोठ हुन्थे । उनीहरूकहाँ चार चुल्हे भन्ने गरिन्थ्यो धनीलाई । अर्थात् एउटा छोरो भेडी गोठमा, एउटा गाई गोठमा र अर्को भैँसी गोठमा भयो भने मात्रै त्यो धनी मानिन्थ्यो सिकलेसीहरूका मात्रै २० वटा र पार्चेलीहरूका ५ वटा भेडी गोठ थिए । अहिले सिकलिसमा जम्मा २ वटा र अर्मलावालासँग मिसाएर थप एउटा गोठ छ भेडीको । यस्तै पहिले ७०/८० वटा गाई भएका २५ वटा गाई गोठ र त्यति नै संख्याका भैँसी गोठ थिए । अहिले ४/५ वटा भैँसी गोठ र ३ वटा मात्र गाई गोठ छन् ।
पहिले कम्बल र बख्खु घरघरमा बुनिन्थे । महिलाहरूमा तानमा कम्बल, बख्खु या भाङ्ग्रा बुन्न जान्ने सीप अनिवार्य जस्तै थियो । तर, अहिले त मेहनत अनुसारको पैसा पनि नहुने भएकाले बुन्न छाडे । मनबहादुरको घरमा नै आफ्ना भेडाको २ क्वीन्टल ऊन त्यसै मिल्केको छ । कतिले त ऊन नै जंगलमा फाल्ने गरेका छन् ।
गुरूङ भन्छन्, ‘लाहुरेले ल्याएको पैसाले फाइदा त गरेको छ र आधुनिकतातिर लम्केको पनि छ । तर, हामी गुरूङहरूको परम्परागत अर्थतन्त्र, भाषा संस्कृति र पहिचान भने समाप्त भएको छ । गोरखादेखि पर्वतसम्मका हिमाली काखमा रहेका गुरूङ बस्तीको कथा यहि हो । जो भर्ती भयो र गयो ऊ यसै लाहुरे भयो जो गएन या जान सकेन या पाएन ऊ पनि गाममा परम्परागत कृषिमा अडिन सकेन । यसले धरै कुरा सखाप पार्दै छ ।’
यसरी सिकलिसको बारेमा अध्ययन गरिसके पछि मलाई सरदार भीमबहादुर पाँडेले लेखेको ‘त्यसबखतको नेपाल’को सन्दर्भ फेरि याद आयो । उनले पहिलो विश्वयुद्ध पछि आएको रेमिट्यान्सले कसरी नेपाली पहाड र लेकाली बस्तीका घरेलु उद्योग सखाप भए र त्यतिबेलाको सस्तो जापानी मालले नेपाल खायो भन्ने उल्लेख गरेका छन् ।
अहिले पनि त्यहि छ नेपालको हालत । पैसा र कमाइ पनि विदेशी मालताल र उपभोग्य वस्तु पनि विदेशी । विदेशमा पसिना बगाउने, विदेशी सामान उपभोग गर्ने र आफू रित्तै रहने । बाजेका पालामा र नातीका पालामा उस्तै हालत । यसरी त लाहुरे पैसाले देशको पनि र परिवारको पनि कायापलट गर्दैन रहेछ बरू त्यसका लागि त स्वतन्त्र स्वदेशी अर्थतन्त्रको विकास र आफ्नै देशमा रोजगारीको सिर्जना हुनुपर्दो रहेछ भन्ने निष्कर्ष पो निस्कदो रहेछ ।
(गोरखा सैनिक आवाज मासिकबाट)
-भैरव रिसाल वि.सं.१९०३ को कोतपर्वपछि राजकाज गर्ने सम्पूर्ण अधिकार पञ्जापत्र गराई राणाहरूले कब्जा गरे ।
अब नरेन्द्र मोदी की राहुल गान्धी ?
छायाँकान्त नायक भारतमा अर्को सातादेखि १७ औं लोकसभाको लागि आम निर्वाचन हुँदैछ । २ महिनाभित्र